किन बनाउँदै छ चिनले कृत्रिम सूर्य, यसबाट वातावरणलाई के असर पार्छ ? | Tungoon
काठमाडौँ । विश्वमा आणविक शक्ति निर्माणको होड चलिरहेको बेलामा संसारको शक्तिशाली मुलुकको सुचिमा पर्ने चिनले कृत्रिम सूर्यको निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । अन्य शक्तिशाली मुलुकरुलाई चुनौती दिने चिनको यस किसिमको तयारीले अमेरिका लगायतका शक्तिशाली मुलुकहरुलाई झड्का लाग्ने देखिएको छ । सन् २०२२ सम्म ३ वटा कृतिम चन्द्रमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको चिनले वास्तविक सूर्यभन्दा करिब ६ गुणा बढी तापक्रम भएको कृत्रिम सूर्य निर्माण गर्ने परियोजनाको थालनी गरेको छ ।
Previousसंगिनी सुईले यसरी रोक्छ गर्भ
Nextबच्चालाई मोबाइल हेर्नबाट कसरी सीमित गर्ने ?
भारतका १० धनी सेलिब्रेटीः कसको कमाई कति ?